China Custom CNC Machining Service factory na ndị na -eweta ya | BASILE
Ikike Ọrụ Mmezi BMT CNC
Dị ka otu n'ime ndị na-eweta ngwa CNC nke na-eto ngwa ngwa, BMT nọ na azụmaahịa maka otu ebumnuche iji dozie nsogbu gị n'ichepụta ngwa ngwa. Ikike igwe ihe ndị a dị na BMT dị iji gboo mkpa gị nke akụkụ CNC MACHINED, sitere na ngwa ngwa ngwa gaa na akụkụ nkenke na igwe eji arụ ọrụ, yana imepụta mmepụta.
CNC na -atụgharị:Usoro nrụpụta nke a na -ejigide ihe mkpọchi na ihe na -agbanwegharị mgbe a na -ebipụta ngwa ọrụ, a na -ahazi ihe eji ebipụ ihe iji wepu ihe iji mepụta ụdị mmemme a chọrọ. Ma ọ bụ, anyị nwere ike ịsị na teknụzụ nke ejiri ihe ngọngọ dochie na etiti ntụgharị CNC ma ọ bụ lathe na -agbagharị na oke ọsọ, ebe ngwa ịkpụ na -abanye na axis na -atụgharị iji hazie ọrụ ọrụ, iji nweta CNC tụgharịrị akụkụ ya na nha nha.
CNC igwe: Usoro igwe eji arụ ọrụ nke na-ejikwa njikwa kọmpụta na ngwaọrụ ịkpụgharị ọtụtụ ihe iji wepu ihe na arụ ọrụ wee nweta ngwaahịa ahaziri iche mgbe ọ bụla usoro nrụpụta ọzọ dị ka mbepụ laser ma ọ bụ mbelata plasma nwere ike nweta otu nsonaazụ; ndị mmadụ na -ahọrọ ịhọrọ nke dị ọnụ ala. Mana ụzọ ndị a enweghị ike iji ya tụnyere ike igwe igwe CNC. A na -ejikarị usoro a maka igwe ihe dị iche iche, dị ka ọla, plastik, alloy, ọla, wdg. akụkụ nwere ụdị ụfọdụ, gụnyere oghere, oghere, oghere, wdg.
CNC mkpọpu ala: Usoro ịchapu nke na-eji mkpọpu mmiri eme oghere nke akụkụ okirikiri okirikiri na ihe siri ike nke a na-etinye ihe eji arụ ọrụ na lathes, igwe igwe ma ọ bụ igwe na-egwu mmiri na ntakịrị mkpọpu na-abụkarị ihe eji egbu ihe; onye na -egbutu osisi ahụ ga -ahazi na oghere oghere wee tụgharịa ka ọ nwee oghere gburugburu. A na -eme usoro mkpọpu egwu a site n'ime ka mmegharị mkpirisi mkpagharị na -emegharị n'ime oghere. CNC Drilling nwere uru ndị a: izi ezi na -enweghị atụ na arụpụta arụrụ arụ, belata mmefu yana ahịrị mmepụta kachasị; ntụgharị na reproducibility.
CNC igwe na atụgharị: Dị ka ọ na -adịkarị, ịtụgharị na egwe ọka bụ usoro nrụpụta abụọ a na -ahụkarị nke na -ewepu ihe site na ngwa ọrụ site n'enyemaka nke ngwa ịcha. Ruo n'ókè ụfọdụ, mgbe ejikọtara egwe ọka na ịtụgharị ọnụ, CNC Milling na Turning dị elu kere. Ọ bụ teknụzụ ngwakọta agwakọta nke ngwa ịcha na ngwa ọrụ na-agbagharị site na nhazi mmemme na sistemụ njikwa ọnụọgụ kọmputa, iji mepụta akụkụ gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ nke nwere ụdị pụrụ iche site na ọtụtụ ụdị ọrụ. Site na teknụzụ ọgbara ọhụrụ a, mmemme dị iche iche ga-eme akụkụ niile dị mgbagwoju anya ngwa ngwa.
Nke gara aga: Aluminum CNC machining Parts
Osote: Akụkụ Metal CNC Machining
Igwe eji arụ ọrụ titanium, Igbe galvanized, High-End mpempe akwụkwọ Metal Parts ngwaahia, Akara akpaghị aka, Omenala igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ, Akụkụ Ngwa CNC,